Calathea: လှေခါးထစ်စက်ရုံ၊ Zebra Plant နှင့်အခြားအရာများ - တန်ဆာဆင်ဥယျာဉ်များ
Calathea: လှေခါးထစ်စက်ရုံ၊ Zebra Plant နှင့်အခြားအရာများ
Calathea lutea, 'Cigar Calathea', 'Cuban Cigar', 'Pampano', 'Maxan'
Calathea makoyana, 'Peacock Plant', 'Cathedral Windows'
Calathea ornata, 'Striped Calathea', 'Pin Stripe Calathea', 'Pin-Striped Calathea'
Calathea roseopicta, 'နှင်းဆီ - ပန်းချီ Calathea'
Q: Calatheas ဆုတောင်းပျိုးပင်ဖြစ်ပါသလား
မြွေဆိုးပေါက်သည့်အပင်တစ်ပင်ကိုသင်စိုက်ပျိုးဖူးပါသလား။ ဥဒေါင်းအပင်တစ်ကောင်ကော။ zebra စက်ရုံလား။ ဤသူအပေါင်းတို့သည် calathea ပုံစံများများမှာ!
ကမ္ဘာ၏အချို့ဒေသများ၌, သူတို့ကအသုံးဝင်အဖြစ်ကောင်းစွာအလှဆင်ပါတယ်။ ဥပမာ Calathea ရွက်များသည်ဂွာတီမာလာတွင် tamale အမျိုးအစားတစ်ခုကိုခြုံရန်အသုံးပြုသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအကြား calathea ရွက်ဆန်ကွန်တိန်နာများသည်ရေပန်းစားသည်။
သို့သော် calathea ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်။ အလုံအလောက်။ ရဲ့ကဘာလဲဆိုတာမှပေါ်ရကြစို့နှင့်မည်သို့ကြီးထွားဖို့!
Calathea အပင်များကြီးထွားရန်ကောင်းသောထုတ်ကုန်များ -
Monterey အရည်ကြေးနီ Fungicide
လူအသုံးအများဆုံးအမည် ဒြပ်ထုပြတင်းပေါက်များ၊ စင်းကာလာတီယာ၊ pin-stripe calathea၊ pin-striped calathea၊ နှင်းဆီပန်းချီကားများ၊ zebra စက်ရုံ
သိပ္ပံနည်းကျအမည် Calathea lancifolia, Calathea lutea, Calathea makoyana, Calathea orbifolia, Calathea ornata, Calathea picturata, Calathea roseopicta, Calathea veitchiana, Calathea zebrina နှင့်အခြားသူများ
အလင်း တောက်ပ, သွယ်ဝိုက်အလင်းရောင်
အပူချိန် ၇၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
စိုထိုင်းဆ အချိန်တိုင်းတွင်စိုထိုင်းဆ ၅၀% သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသည်
ပိုးမွှား ပင့်ကူသွင်း, aphids, mealybugs, စကေးအင်းဆက်ပိုးမွှား, မှိုခြင်, အမြစ်ထုံး nematodes, ပွေး nematodes, ကျိုင်းကောင်, ပတ်ကျိ
ရောဂါများ Pseudomonas ရွက်အစက်အပြောက်, psuedomonas လယ်ယာ, Alternaria အရွက်အစက်အပြောက်, helminthosporium အရွက်အစက်အပြောက်, fusarium, အမြစ်ပုပ်, သခွားသီး mosaic ဗိုင်းရပ်စ်
အများအပြားဒါဇင်မျိုးစိတ်အကြားတက်ကွဲ Calathea ၏သုံးရာနီးပါး cultivars ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်၎င်းတို့အားလုံးကိုမဖုံးအုပ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Marantaceae မိသားစုစက်ရုံ၏ပိုမိုလူကြိုက်များသောမျိုးကွဲများကိုကောင်းကောင်းခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
ဤအပူပိုင်းအမြဲစိမ်းကိုကာလီဖိုးနီးယား၊ ဖလော်ရီဒါနှင့်ဟာဝိုင်ယီပြည်နယ်များရှိအိမ်ပြင်တွင်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ အပူချိန် ၆၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သို့မဟုတ်အပူချိန်လိုအပ်သည်။
၎င်း၏ပုံစံသည်မြွေသံမြည်သည့်အမျိုးအစားနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သစ်ရွက်၏အထက်ပိုင်းသည်အလယ်အလတ်စိမ်းလန်းသောစိမ်းလန်းသောအစွန်းများ ဖြစ်၍ အမည်းရောင်အနားများနှင့်ဘဲဥပုံအစက်များရှိသည်။ မြေအောက်အောက်ရှိအရွက်များသည်ကြက်သွေးရောင်သို့မဟုတ်အနီ - ခရမ်းရောင်အရောင်ရှိသည်။
အိမ်တွင်းတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ပေခွဲအရွယ်အထိကြီးထွားနေစဉ်ပြင်ပအပင်များသည်အပိုအမြင့်အထိကြီးထွားနိုင်သည်။ ဤအရွက်များသည်တက်ကြွ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကြောင့်ကြီးထွားရန်အတော်အတန်ရေပန်းစားသည်။
ဂွာတီမာလာတွင် tamales ခြုံရန်အသုံးပြုသည် calathea lutea တွင်ရှည်လျားပြီးလှော်ပုံသဏ္leavesာန်ရှိသည်။ ဤ calathea စက်ရုံသည်ပျှမ်းမျှ calathea ထက် ၆.၁၀ at ရှိအိမ်ပြင်အမြင့်တွင်များစွာကြီးထွားလေ့ရှိသည်။ အိမ်တွင်းတွင်၎င်းသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သည်။
Calathea lutea ၏အရွက်များသည်ကြီးမားပြီးတစ်ခါတစ်ရံအရှည်မီတာအထိရောက်သည်။ သဘာဝမှဖယောင်းပစ္စည်းတစ်ခုသည်အပူကိုကာကွယ်ရန်အရွက်၏အောက်ခြေတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဒါကသူတို့ကိုအရွက်အဖြစ်စုံလင်စေသည်။
အဆိုပါဆေးပြင်းလိပ်ရည်ညွှန်းသည်ဆေးပြင်းလိပ်နှင့်တူသောဖယောင်းအနီ - အညိုရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင် bracts များဖြစ်သည်။ ဤအရိပ်အဝါရောင်များအကြားအဝါရောင်သေးငယ်သောပန်းများပေါ်လာသည်။
Calathea makoyana, 'Peacock Plant', 'ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဝင်းဒိုး'
အရွက်များအောက်တွင်အစိမ်းရောင်အနက်ရောင်ကိုပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်တန်ချိန်များဖြင့်အစားထိုးသည် မှလွဲ၍ ပုံစံကိုထင်ဟပ်စေသည်။
Calathea makoyana သည် Royal Horticultural Society မှ Garden Merit ၏ဆုကိုရရှိသည်။
spearpoint-shaped အပင်အစား rounded ဘဲဥပုံအရွက်နှင့်အတူ, calathea orbifolia တစ် ဦး အတော်လေးဒီကဗျာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော pin stripe calathea ထက်ပိုမိုကျယ်သောအစင်းများရှိသည်။
calathea orbifolia သည်အခြား calatheas များနှင့်ကွဲလွဲနေသည့်နေရာတွင်ရှိသည်။ ရင့်ကျက်သောနမူနာများအရွက်သည် ၁၅″ မှ ၃၅ between အကြားရှိနိုင်ပြီးအပြင်ဘက်တွင်ပေအမြင့်အထိကြီးထွားနိုင်သည်။
အိမ်တွင်းတွင်၎င်းသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သော်လည်းအခြား calathea နမူနာများထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအရွက်များရရှိနေသည်။
Calathea ornata ။ ရင်းမြစ် - ဝီကီမီဒီယာ Commons
စိမ်းလန်းစိုပြေသောနက်ရှိုင်းသောအရွက်များသည်ဤမျိုးစုံရှိအစိမ်းရောင်၊ အဖြူ၊ ဆင်စွယ်သို့မဟုတ်ပန်းရောင် feathery အစင်းများနှင့်တူသည်။ ဤရွေ့ကားဒဏ်ငွေဒဏ်ချက်ငှက်ရဲ့အမွေးအတောင်ကဲ့သို့တူညီသောကြည့်ဖန်တီးပါ။
အရွက်၏အောက်ဘက်တွင်မြဲမြံသောအပင်နှင့်ဆင်တူသည့်ခရမ်းရောင်အရောင်ရှိသည်။ အပင်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှပန်းရောင် - အဝါရောင်ပင်များပင်လျှင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအဖြူရောင်အစင်းပေါ်သို့မှေးမှိန်သွားလေ့ရှိသည်။
ဤသည်ဆွဲဆောင်မှုစက်ရုံရဲ့အရောင်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားပေါ်ကနေ stacked မျိုးစုံရွက်အကြံပြုထားသည်။ မျိုးအများစုတွင်အရွက်အများစုသည်အစိမ်းရောင်ရှိအနက်ရောင်ငွေရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်တမျိုးဖြစ်သည်။
နှင်းဆီပန်းဆေးကြောထားသော calathea အမျိုးအစားများစွာသည်အများအားဖြင့်၎င်း၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရွက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရောင်တောက်ပမှုသည် leafstem မှအလင်းရောင်သို့မဟုတ်အညိုရင့်ရောင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံသဏ္radiာန်များနှင့်ကွဲထွက်နေပုံရသည်။
ပင်စည်ကိုယ်နှိုက်တွင်ခရမ်းရောင်သို့မဟုတ်ပန်းရောင်ရောင်ရှိနိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံထိုအရောင်များကိုသစ်ရွက်ကြိုးများဖြင့်သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ အရွက်များရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှပိုမိုပေါ့ပါးသောတန်ချိန်များသည်အဖြူရောင်အဖြစ်သို့ရောက်သွားပြီးအစိမ်းအနက်ရောင်သည်နက်ရှိုင်း။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဤ calathea သည်နွေရာသီလများအတွင်းအဖြူရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်ပန်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ပန်းများသည်အရွက်များကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။
ဒီ calathea ၏အရွက်များကခရမ်းရောင်အရောင်ကိုအရွက်၏အထက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိစေပြီးစံအလင်းနှင့်မှောင်မိုက်သောအစိမ်းရောင်အရောင်များနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ Burgundy သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင် banding သည်ဤခက်ခဲသောနေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော calathea ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
သို့ရာတွင်၎င်းသည်၎င်း၏ဇာတိမြေအီကွေဒေါနိုင်ငံတွင်ခြိမ်းခြောက်မှုနီးပါးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုအပူပိုင်း arboretums တွင်တွေ့နိုင်သော်လည်းဒေသဥယျာဉ်စင်တာတွင် calathea veitchiana ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။
အဆိုပါ zebra စက်ရုံ၏အရွက်များအစင်း၏၎င်း၏အမည်ကိုမှလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်။ အလင်းရောင်၊ ငွေရောင် - အစိမ်းရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်မှောင်မိုက်သောပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများသည်ဤအစင်းများသည်ထူးခြားပြီးလှပသည်။
ဤသည်အခြားမြင်းကျားသစ်ပင်, Aphelandra squarrosa နှင့်အတူမရောထွေးသင့်ပါတယ်။ Calathea zebrina သည်၎င်းနှင့်အတူဘုံအမည်ကိုမျှဝေသော်လည်း Aphelandra အမျိုးမျိုး၏အဝါရောင်ပန်းများမရှိပါ။
calathea zebrina တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစင်းများရှိသောကြောင့်၎င်းနှစ်ခုကိုခွဲခြားရန်လွယ်ကူသည်။
calatheas အားလုံးသည်အစတွင်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ဤအပူပိုင်းဒေသအပင်များသည်အလွန်တရာမှခဲယဉ်းပြီးတိကျသောအခြေအနေများကိုသာနှစ်သက်သည်။ သငျသညျကောင်းသော calathea စက်ရုံစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်လျှင်မူကား, သင်သည်သင်၏လူနေမှုအာကာသနေထိုင်ရန်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အပူပိုင်းဒေသစက်ရုံရပါလိမ့်မယ်။
ဇုန် ၁၀-၁၁ သည် calathea အပင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်သတိပေးချက်နှင့်အညီ - အများစုသည်နေရောင်အပြည့်ဖြင့်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
တောက်ပသောသွယ်ဝိုက်အလင်းသည်၎င်းတို့၏ကြီးထွားမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ Calatheas သည်တစ်နေ့လျှင်ဤတောက်ပသောသွယ်ဝိုက်အလင်းရောင်၏ ၈ နာရီကိုပိုနှစ်သက်သည်။ အဟောင်းများကို calathea lutea အပင်များမှအပအများစုသည်နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ရရှိသောအချိန်တွင်အများစုသည်ညှိုးနွမ်းသွားလိမ့်မည်။
ဒီအပင်များအတွက်အပူချိန်လည်းအရေးကြီးတယ်။ အပူချိန် ၆၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အောက်ရှိအပူချိန် ၆၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိမများနိုင်ပါ။ သူတို့က ၇၅ ဒီဂရီလောက်ပူနွေးချင်တယ်။
Calatheas ကိုအခြားဇုန်များတွင်လည်းစိုက်ပျိုးနိုင်သည်၊ သို့သော်အိမ်တွင်းတွင်သာစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ အကယ်၍ အိမ်တွင်းတွင်ကြီးထွားလာပါက ၇၀ မှ ၇၅ ဒီဂရီအထိသူတို့ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်၊
သင်၏စက်ရုံများကိုအစွန်အဖျားကျသောနေရာများမှအပေါက်များသို့မဟုတ်အခြားလေထုအရင်းအမြစ်များနှင့်ဝေးဝေးထားပါ။ ၄ င်းတို့သည်ရုတ်တရက်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သည်၊ အကယ်၍ သင်၏စက်ရုံသည်လေအေးပေးစက်လမ်းကြောင်းသို့ရောက်သွားပါကဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည်!
calathea စက်ရုံသည်စိုထိုင်းဆကိုနှစ်သက်သည်။ သို့သော်သူကစိုစွတ်သောခြေကိုမုန်း၏။ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဟန်ချက်ညီစေသောလုပ်ရပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤစက်ရုံသည်ရေအရည်အသွေးကိုအထူးဂရုပြုသည်။ ၎င်းသည်စင်ကြယ်သောရေကိုနှစ်သက်သော်လည်းခဲယဉ်း။ fluoridated (သို့) အခြားတစ်နည်းအားဖြင့်ပြောင်းလဲထားသောမည်သည့်အရာမဆိုအရွက်အစွန်အဖျားကျခြင်းသို့မဟုတ်အရွက်ကောက်ခြင်းများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အပူပိုင်းဒေသအနေနှင့်၎င်းသည်ရေ၏အပူချိန်ကိုလည်းထိခိုက်လွယ်သည်။
calatheas ရေလောင်းတဲ့အခါဖြစ်နိုင်ရင်အခန်းအပူချိန်ရေကိုသုံးပါ။ ရေစက်ရေကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လက်ဖြင့်ရေမသောက်ရသေးပါကကွန်တိန်နာတစ်လုံးကိုရေဖြည့်ပြီးအသုံးပြုခြင်းမပြုမီအနည်းဆုံး ၂၄ နာရီဖွင့်ထားပါ။
မြေဆီလွှာသည်အညီအမျှစိုထိုင်းနေမည်၊ ရေအလွန်အကျွံသည်စက်ရုံကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထိပ်လက်မ (သို့) နှစ်ခုရှိမြေဆီလွှာသည်ခြောက်သွေ့သည်ဟုခံစားရလျှင်အရွက်များကိုတိုက်ရိုက်စိုစွတ်စေခြင်းနှင့်ရေကိုသာရှောင်ကြဉ်ပါ။
ရေမသောက်ဘဲ calatheas အတွက်စိုထိုင်းဆမြင့်မားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
အိမ်တွင်းမှာရှင်းပါတယ်။ စက်ရုံရဲ့အောက်မှာကျောက်စရစ်ခဲဗန်းတစ်ခုထားပါ။ သငျသညျဗန်းထဲမှာလက်မတစ်လောက်ကကျောက်စရစ်ခဲတွေလိုချင်တယ်၊ ပြီးတော့ကျောက်စရစ်ခဲတွေကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်လောက်မှာရေလိုချင်တယ်။ မြေကြီးကိုစိုစွတ်စေသောကြောင့်ဗန်းကိုအပြည့်မဖြည့်ပါနှင့်။
Calathea မြေနှင့်စပ်လျဉ်း။ အချက်နှစ်ချက်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုစိုစွတ်အောင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်၊ သို့သော်စိုစွတ်စေခြင်းမပြုရ။
အချို့ကအာဖရိကခရမ်းရောင်မြေဆီလွှာများကဲ့သို့ပိုမိုကြမ်းတမ်းသောရောနှောခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြပြီး၊ သင်သည်သင်၏ရေလောင်းချိန်ညှိပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အခြားသူများကရောနှောထားသောအပိုင်းပိုင်းဖြစ်သောသစ်ဆွေး ၂ ခု၊ perlite ၂ ပိုင်းနှင့်မြေဆီလွှာသို့မဟုတ်ကောင်းသောဆွေးတစ်ပိုင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
ငါ calatheas များအတွက်အာဖရိကခရမ်းရောင်ရောနှောဆီသို့ ဦး တည်လေ့ရှိပါတယ်။ ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအာဖရိကမှခရမ်းရောင်ရောနှောမှုသည်ကောင်းမွန်သောရေစီးမြောင်းရှိပြီးသစ်ဆွေးရေညှိသည်မြေအများစုကိုစိုစွတ်စေနိုင်ရန်အတွက်ရေလုံလောက်စွာရရှိသည်။
ဤအပင်များနှင့်မသင့်တော်သောအရာတစ်ခုမှာ၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပျော့ပျောင်းစေရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျောက်ကပ်အပင်များသည်၎င်းတို့အားမကြိုက်ပုံမပေါ်သည့်အတွက်အထူးသဖြင့်ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ သငျသညျအငွေ့ပြန်ခြင်းမှတဆင့်မြေဆီလွှာအပိုဆောင်းစိုထိုင်းဆကိုချင်တယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အထူးသဖြင့်ရေနုတ်မြောင်းနေသောအရောအနှောကိုအသုံးပြုနေပါက၊ သို့မဟုတ်သင်ရေကိုမေ့သွားတတ်သည်ဆိုပါကရေထုကိုသင်ထည့်ချင်ပေမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည်ချည်မျှင်တစ်ချည်လိုအပ်သည်၊ ဟောင်းတီရှပ်ပစ္စည်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
သင်၏စက်ရုံကိုလှဲချသည့်အခါမြေကြီးအောက်ပိုင်းသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးအိုး၏အောက်ခြေကိုချိတ်ထားပါ။ အိုးထဲသို့ရေထဲသို့နှစ်ပြီးသောပစ္စည်းနှင့်ကျောက်စရစ်ခဲဗန်းတစ်ခုပေါ်တွင်ထားပါ။
တစ် calathea fertilizing သောအခါ, လျော့နည်းပိုသည်။ Calatheas fertilization တစ်ခုလုံးအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး။
ငါလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်ရေစက်တစ်ရေလီတာတွင်ရောနှောသော kelp ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။ တစ်လတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ရေလောင်းပေးသည့်ဓာတ်မြေသြဇာနည်းနည်းဖြင့်အစားထိုးလိုက်ပြီးထိုလီတာကိုအချိန်အတန်ကြာဖြန့်ပါ။
ဤသည်သည်သင်၏စက်ရုံအတွက်လုံလောက်သောအာဟာရဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်များလွန်းသောအရွက်များအဝါရောင် (သို့) အညှော်ခြင်းနှင့်ညှိုးနွမ်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဓာတ်မြေသြဇာမပါသည့်အခြားပြofနာများ၏လက္ခဏာများလည်းဖြစ်နိုင်သဖြင့်သတိထားပါ။
နွေ ဦး၊ နွေရာသီနှင့်မြေသြဇာကျဆင်းမှုသည်အချို့သောစိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်သည့်အရာများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏စက်ရုံသည်လစဉ်ဓာတ်မြေသြဇာပြီးနောက်ပုံမှန်အဝါရောင်ဖြစ်ပါကကြိမ်နှုန်းကိုထိုနှုန်းအထိလျှော့ချပါ။
Marantaceae မိသားစုရှိအခြားအပင်များနှင့်မတူဘဲ calathea သည်ရှမှယုံကြည်စိတ်ချစွာပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ အလားတူပင်မျိုးစိတ်အားလုံးသည်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရန်ပန်းပွင့်ခြင်းမျိုးမရှိကြပါ။ ထို့ကြောင့်မျိုးစေ့အားဖြင့်ပြန့်ပွားရန်ခက်ခဲလျှင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
calathea အပင်များပြန့်ပွားရန်တစ်ခုတည်းသောယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းမှာဌာနခွဲမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ သင်ပိုမိုကြီးမားသောအိုးထဲသို့ပြန်လည်စဉ်းစားရန်စဉ်းစားသောအခါယေဘုယျအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ နေရာကိုချဲ့ထွင်မည့်အစားသင်၏စက်ရုံကိုအဘယ်ကြောင့်မပွားများစေသနည်း။
အာဖရိကခရမ်းရောင် potting ရောနှောမှုအချို့ကိုစိုစွတ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ သင်ထိရုံမှ damp ရုံစိုစွတ်သောချင်ကြဘူး။ သင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသောအိုးတစ်ခု၏အောက်ခြေတွင်ငွေအနည်းငယ်ထည့်ပါ။
သင်၏လက်ချောင်းများကို အသုံးပြု၍ ပင်စည်နှင့်အမြစ်အပိုင်းအစများကိုညင်ညင်သာသာခွဲထုတ်ပါ။ သင်သည်သူတို့၏တွဲဖက်အမြစ်စနစ်နှင့်အတူအရွက်အနည်းငယ်ချင်တယ်။ လတ်ဆတ်သော, pre- စိုထိုင်းသော potting ရောနှောအတွက် repot ။ မင်းရဲ့ calathea ကိုအရင်စိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစိုက်ပါ။
သင်သည်သင်၏စက်ရုံတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုပါကအလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပိုလျှံသောမြေဆီလွှာများကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးစိုစွတ်သောအာဖရိကခရမ်းရောင်ရောစပ်ထားသောအိုးတစ်လုံးတွင်စတင်ပါ။ သင့်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သောမြေဆီလွှာကိုသင်၏ဆွေးပုံပေါ်တွင်ထည့်နိုင်သည်။
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်တံစဉ်များကို calatheas သက်ဆိုင်သည့်အခါတစ် ဦး ဗေဒအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ အရွက်ဟောင်းများသည်အသက်အရွယ်နှင့်အဝါရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်ပြောင်းနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုသန့်ရှင်း။ မြုံနေသောစုံတွဲတစ်တွဲကို အသုံးပြု၍ ချုံ့သင့်သည် တံစဉ်များကိုဖြတ်ခြင်း ညာဘက်မြေဆီလွှာရဲ့မျက်နှာပြင်အထက်။
အဝါရောင်အရွက်များသည်စက်ရုံ၏ဗဟိုနှင့်ပိုနီးလျှင်သင်၏စက်ရုံသည်ပြသနာတစ်ခုအားသတိပေးရန်ကြိုးစားနေသည်။ အပူချိန်ကမမှန်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းကအရမ်းများလွန်းလွန်းနေတယ်။
Calfheas များသည်အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်မြေသြဇာများပြားနေလျှင်၎င်း၊ သူတို့စားသုံးနေသောရေကိုမနှစ်သက်ပါကသို့မဟုတ်သူတို့၏မြေဆီလွှာထဲတွင်ဓာတ်သတ္တုဆားများများများစားစားရှိပါသလား။ အလင်းရောင် (အလွန်များလွန်းလွန်းသည်ဖြစ်စေ) သည်လည်းတရားခံဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုအလယ်ပိုင်းအရွက်များကိုချုံ့ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဝါရောင်ဖြစ်စေသောအကြောင်းတရားများကိုအာရုံစိုက်ပါ။ သင်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုရှာတွေ့ပြီဆိုရင်၊
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်၏ calathea ပန်းပွင့်သောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်, သူတို့ညှိုးနွမ်းသွားပြီတစ်ချိန်ကသေပြီပန်းပွင့်ရိုးတံကိုချွတ်ဖို့သေချာပါစေ။ ၎င်းသည်သင်၏စက်ရုံအား၎င်း၏စွမ်းအင်ကိုကြီးထွားမှုအသစ်သို့ထည့်ရန်အားပေးသည်။ အပင်၏အောက်ခြေတွင်ရှိသောအညှာတစ်ခုလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း calatheas များသည်အပင်သေးသေးများဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောရလဒ်အတွက်အသုံးအများဆုံးပြissuesနာများကိုကိုင်တွယ်ပုံဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားပိုင်ရှင်အသစ်များသည်၎င်းကိုတွေ့ရှိကြသည် အရွက်ဆံပင်ကောက်ကောက်သို့မဟုတ်လိပ်ပုံရသည် ။ ဤသည်များသောအားဖြင့်အပင်တစ်ဝိုက်တွင်စိုထိုင်းဆမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
စိုထိုင်းဆကို ၅၀% နှင့်အထက်သို့တိုးပါ ဖြစ်စေ၎င်းသည်ကျောက်စရစ်ခဲဗန်းတစ်ခု၏ထိပ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အနီးအနားရှိ humidifier ထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ။
သင်သည်ရေမှုန်ရေမွှားတစ်ခု (သို့) ရေအခိုးအငွေ့နှစ်ခုကိုအရွက်များပေါ်တွင်ညှစ်ထားနိုင်သည်။ သို့သော်ရေစက်များစုပုံလာစေရန်မလုံလောက်ပါ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ရေစက်ရေကိုသုံးပါ။
အပင်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်း, အဝါရောင် ပြproblemsနာအတော်များများကိုဆိုလိုတယ် (အချို့ကိုအထက်မှာဖေါ်ပြထားသည့်အပိုင်းဖြတ်ခြင်းကဏ္inတွင်ဖော်ပြထားသည်) ။
သင်၏ကလီသီယာကိုသင်အစပိုင်းတွင်ရေလောင်းသည့်အခါ၊ ၎င်းသည်မြေသြဇာထည့်သည့်အခါ၊ နေ့တိုင်းရရှိသောအလင်းမည်မျှနှင့်အခြားအခြေအနေများကိုခြေရာခံပါ။ အကယ်၍ တစ်ခုသည်အကောင်းဆုံးထက်နည်းနေပါကမည်သည့်အခြေအနေကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်။
အရွက်ဖြူ အလွန်နည်းသောဓာတ်မြေသြဇာ၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ သင်၏အရွက်များသည်ဆေးကြောနေခြင်းသို့မဟုတ်မှေးမှိန်နေပုံရလျှင်သင်၏လာမည့်ရေလောင်းစနစ်တွင်နိုက်ထရိုဂျင်ကြွယ်ဝသောဓာတ်မြေသြဇာထည့်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
အိုးကြီးကြီးကိုမသုံးပါနှင့် မင်းရဲ့ calathea! သငျသညျ repot အခါ, သင်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုအားပေးဖို့ကြိုးစားနေလျှင်သင်၏လက်ရှိအိုးထက်တစ်လက်မသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့အိုးကိုသုံးပါ။ အိုးကြီးတစ်လုံးသည်စိုစွတ်လွန်း။ မြေဆီလွှာအတွက်အမြစ်ပုပ်စေနိုင်သည်။
calathea အတွက်အသုံးအများဆုံးပိုးမွှားဖြစ်သည် ပင့်ကူ mite ။ ၎င်းသည်မည်သည့်အိမ်အပင်အတွက်မဆိုအဓိကအန္တရာယ်ရှိနိုင်သော်လည်းအထူးသဖြင့်ဤစိမ်းလန်းစိုပြေသောအပူပိုင်းဒေသများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပုံရသည်။
ဤအဘို့အအသုံးအများဆုံးကုသမှုဖြစ်ပါတယ် ဆီယူပါ သင်မူကားရနံ့ကိုပိုနှစ်သက်လိမ့်မည် Mite-X အိမ်တွင်းကလေးညှင်းပွင့်များအများအားဖြင့်အနံ့အဖြစ်။
Aphids လည်းအလွယ်တကူသော်လည်းနှစ်ခုအထက်ပါကုသမှုတစ်ခုခုကိုကထိန်းချုပ်ထားကြသည် ဆီယူပါ နည်းနည်းပိုထိရောက်တယ်။ ပင့်ကူသွင်းမတူဘဲဤအရာများသည်အိမ်တွင်းဘုံနည်းပါးသော်လည်း၊
ကြက်သွန်ဖြူ နှင့်အခြား အင်းဆက်ပိုးမွှားများ သင့်ရဲ့ calathea ပေါ်တွင်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခါ, ဆီယူပါ ဒီပိုးမွှားတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်ပေမဲ့၊ ပိုဆပ်ပြာ ။
တစ်ခုကအခြား bug ကို ဆီယူပါ တိုက်ခိုက်ရေးနိုင်ပါတယ် မှိုခြင်ကောင် ။ ဤလူကြီးများသည်သေးငယ်သောပိုးမွှားများ၏တိမ်များကိုဖွဲ့စည်းသော်လည်းဤသေးငယ်သော bug များသည်အခြားအရာများထက် ပို၍ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ သို့သော်ပိုးလောင်းများသည်သင်၏စက်ရုံ၏အမြစ်များမှတစ်ဆင့်စားနိုင်သည်။
သငျသညျမွို့ထဲသို့တူးမဟုတ်လျှင်မှိုခြင်ကောင်မှိုကိုမမွငျနိုငျသောကြောင့်, ငါဖြည့်စွက်အကြံပြုပါသည် အကျိုးရှိသော nematodes အမြစ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီဖို့မြေဆီလွှာရန်။
သူတို့အားအကျိုးရှိသော nematodes မှတစ် ဦး ကဆက်ပြောသည်အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ မဆို အမြစ်ထုံး nematodes ဒါမှမဟုတ် nematodes burrowing သင်၏စက်ရုံ၏အမြစ်များကိုတိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။
အချို့ပုံစံများ ခူ ပျော်ရွှင်စွာ calathea အရွက်ကိုစားလိမ့်မယ်။ ပိုးမွှားအမျိုးမျိုးနှင့်လိပ်ပြာများကတည်ဆောက်ထားသည့်ဤလောင်းလောင်းလောင်းလောင်းပုံစံငယ်များသည်ရေမှုန်ရေမွှားတစ်ခုနှင့်အလွယ်တကူသုတ်ပစ်နိုင်သည် Monterey BT ။
နောက်ဆုံး၌သင်၏အပင်များသည်အိမ်ပြင်တွင်ရှိလျှင်၎င်းကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည် ပတ်ကျိ အရွက်များကိုစားလိမ့်မည်။ တူငါးစာ ဥယျာဉ်ကို Safe ပက်ကျိ & ခရုငါးစာ သူတို့ကိုအပင်များမှအာရုံလွှဲပြီးသတ်ပစ်လိမ့်မည်။
Psuedomonas ဘက်တီးရီးယားများသည်မတူညီသောပြtwoနာနှစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်သည် psuedomonas အရွက်အစက်အပြောက် နှင့် Psuedomonas လယ်ယာ ။
နှင့်အတူ psuedomonas အရွက်အစက်အပြောက် , ရေစိမ်အစက်အပြောက်သင့်ရဲ့စက်ရုံရဲ့အရွက်ပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်အနက်ရောင်မှစိမ်းလန်းသောမှောင်မိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့်မည်သည့်အထူးသဖြင့်အရွက်အပေါ်စုံတွဲတစ်တွဲထက်ပိုမရှိသလောက်ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တစ် ဦး ကကြေးနီ -based fungicide Monterey အရည်ကြေးနီ Fungicide သူတို့အားတက်ရှင်းလင်းကူညီပေးနိုင်သည်။
Psuedomonas လယ်ယာ အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးသည်။ ရေစိမ်ထားသောနေရာများသည်အရွက်သွေးပြန်ကြောများတစ်လျှောက်ပေါ်လာပြီးအရွက်များတစ်လျှောက်လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မည်။ ဤပေါက်ကွဲမှုသည်ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများသည် papery နှင့်အညိုရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ဒီပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူပြproblemနာ Psuedomonas ဘက်တီးရီးယားတိကျတဲ့မျိုးစိတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသောကြောင့်, ဒါကြောင့်အဘို့အထူထောင်မရှိကုသမှုရှိပါတယ်။
အရွက်အစက်အပြောက်နှစ်ခု Alternaria အရွက်အစက်အပြောက် နှင့် helminthosporium အရွက်အစက်အပြောက် , calatheas အပေါ်ဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဤဖန်းဂတ်စ်ကြီးထွားမှုနှစ်ခုစလုံးသည်အရွက်များသည်ကြာရှည်စွာစိုစွတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့အပင်များအတွက် overhead ရေလောင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ အသုံးပြုပါ Monterey အရည်ကြေးနီ Fungicide ဤအဖန်းဂတ်စ်ရောဂါများ၏ breakouts ကုသရန်။
Fusarium အဖြစ်ကောင်းစွာ calatheas ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဤဖန်းဂတ်စ်ရောဂါသည်အဝါရောင်နှင့်အရွက်များညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီရောဂါမြေဆီလွှာသူ့ဟာသူတွင်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
ပျက်စီးလွယ်သောအပင်များမှမြေဆီလွှာအားလုံးကိုသေသေချာချာဆေးကြောပါ။ သင်၏အပိုင်း ၁ ပိုင်းပါသောအရည်ကို ၉ ပိုင်းသို့ဆေးချွတ်ပါ။
ထိုအခါမြုံမြေဆီလွှာတွင်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနှင့်ကုသမှုလုပ်ပါ ကြေးနီ fungicide ရောဂါပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသေချာစေရန်နောက်လအတွက်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်။
အကယ်၍ သင်၏စက်ရုံသည်အလွန်အကျွံ - စိုစွတ်သောအခြေအနေတွင်ရှိလျှင်၎င်းသည်ခံစားရနိုင်သည် အမြစ်ပုပ် ။ သင့်ရဲ့မြေဆီလွှာကိုစိုစွတ်စေချင်တယ်၊ ၎င်းသည်ရေကောင်းစွာမစီးဆင်းစေရန်နှင့်ရေမလွန်စေရန်သေချာစေပါ။
ကျနော်တို့ဖုံးလွှမ်းသွားမယ့်နောက်ဆုံးရောဂါဖြစ်ပါသည် သခွားသီး mosaic ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ။
ဒီရောဂါကြောင့် calatheas ကိုမသတ်ဖြတ်နိုင်သော်လည်းသူတို့ဟာ၎င်းကိုသယ်ဆောင်ပေးတဲ့အပြင်အခြားအပင်များအတွက်လည်းသေစေနိုင်သည်။ အနီရောင်ဂျပ်ပုံစံများသည်သင်၏စက်ရုံ၏အရွက်များမှတဆင့်ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, mosaic ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျောက်ဆေးပျောက်ကင်းမရှိ။ သင့်တွင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သောအခြားအပင်များရှိပါက ၄ င်းတို့ကိုပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာရောဂါကူးစက်ခံရသည့်အပင်များအားဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းမပြုမီသူတို့၏အိုးများကိုပိုးသတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရှိသည့်မြေဆီလွှာကိုပြန်လည်အသုံးမပြုပါနှင့်။
ဟုတ်တယ်။ Calathea ကိုကြောင်များနှင့်ခွေးများအားအဆိပ်ကင်းဟုမှတ်ယူသည်။ ငါငှက်များအကြောင်းကိုသေချာမသိသော်လည်း, သူတို့သည်လည်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကြွက်များအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံစဉ်းစားပါတယ်, နှင့်ကြွက်သို့မဟုတ်ဟမ်းစစတူကဲ့သို့သောအခြားကြွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များများအတွက်အတော်လေးလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။
ငါသျောလညျး, သင့်ကြောင် calathea စားရန်သင့်အားအားပေးပါဘူး။ ကြီးပွားစေ လမ်းဘေး သို့မဟုတ်ကြောင်မြက်အစား! Fido (သို့) Fluffy ကသင်၏အိမ်တွင်းအစာကိုစားရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ ၎င်းသည်၎င်းမှကြာရှည်ပျက်စီးခြင်းမရှိသင့်ပါ။
Maranta မျိုးစိတ်များကိုဆုတောင်းခြင်းစက်ရုံဟုလည်းခေါ်ဝေါ်ကြသော်လည်း calathea မျိုးစိတ်များကိုထိုအမည်ဖြင့်လည်းမကြာခဏခေါ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့နှစ် ဦး လုံးသည် Arroot ဆုတောင်းစက်ရုံမိသားစုဖြစ်သည့် Marantaceae ထဲသို့ကျသည်။
Marantas အများစုတွင် ovat အရွက်များပိုများသည်များသောအားဖြင့်လှံများ၊ အသုံးအများဆုံးဖြစ်သော Maranta leuconeura ကိုအခြားအရာများထက်ဆုတောင်းပျိုးပင်ဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။
သို့သော် Calathea မျိုးစိတ်နည်းပညာပိုင်းကြောင်းသတ်မှတ်ရေးအတွက် Maranta မျိုးစိတ်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, ဆုတောင်းပဌနာအပင်များမရှိကြပေ။ သူတို့နှစ် ဦး သည်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသဖြင့်တစ် ဦး ကိုကြီးပွားသူများသည်အခြားတစ် ဦး ကိုလည်းမကြာမကြာကြီးထွားစေလိမ့်မည်။
ကြင်နာမှုက k3 l300 ဖြစ်သည်
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် calathea စောင့်ရှောက်၏စိန်ခေါ်မှုမှတက်နေစဉ်းစား? ဤအပူပိုင်းဒေသများသည်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းအပင်ပေါ်တွင်သင်စိုက်ကြည့်ခြင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းရကျိုးနပ်ပါသည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားကဘာလဲ ငါ့ကိုမှတ်ချက်များအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသိကြကုန်အံ့!